Chii chinonzi iTunes Mubatsiri uye chakaremara sei? | IPhone nhau
Chii chinonzi iTunes Mubatsiri uye chakaremara sei?
Kana isu tichiona kuti komputa yedu, ingave Mac kana chero PC, haifambi nekukurumidza sezvatakambojaira kana kuda, chinhu chekutanga chatino tarisa paIchiitiko Chekutarisa. Muchiitiko ichi tinotarisa kuti ndeupi chirongwa chiri kushandisa zviwanikwa zvakanyanya, chimwe chinhu icho kubva kunguva dzazvino vhezheni dzeOS X isu tinogona kungotarisa nekutarisa iko kweCPU kushandiswa. Zvakajairika kuona mune runyorwa rwemaitiro imwe yadzo inonzi iTunes Mubatsiri. Uye chii ichocho? Seizvo zita rinoratidza, iri "iTunes wizard."
Asi ndeipi rubatsiro inoda iTunes? Iko kune basa mune yemuno Apple mutambi uyo anoitisa kugara uchiongorora USB zviteshi. Chii tsvaga zvinobatana nemidziyo yekubatanidza ine iTunes, ayo ari maPhones, maPod uye maPads, nedonzvo rekuti, kana takaigadzira (nekutarisa bhokisi rauri kuona mumufananidzo unotevera), vhura iTunes paunenge uchibatanidza chimwe chezvinhu izvi wotanga kuenderana otomatiki. Muchikamu chino isu tichaedza kutsanangura zvese zvakadzama zveiyi wizard iyo, dzimwe nguva, haina musoro kuti iitwe.
Chekutanga pane zvese ini ndoda kutsanangura chimwe chinhu icho vamwe vashandisi vanokanganisa: iTunes Mubatsiri haina mhosva chechimwe chinhu chinoitika kana tiri kubhurawuza, tinowana chinongedzo (semuenzaniso, kubva kunjini yekutsvaga) kuenda kunyorera kubva kuApp Store kana Mac App Store, tinodzvanya pairi uye iTunes inovhura kana iyo Mac App Store yeOS X. Icho chinhu chinondinetsa, sezvo ini ndichisarudza kuona ruzivo mubrowser uye, kana ini ndichifarira, riwane iro nemaoko.
1 Chii chinonzi iTunes Mubatsiri?
2 Maitiro ekudzima iTunes Mubatsiri
3 Ko kana ndikashandisa Windows?
Chii chinonzi iTunes Mubatsiri?
Zvinoenderana. Mubvunzo wekutanga ndewokuti: Ndine chishandiso cheIOS here?
Kana mhinduro iri "kwete", Ini handidi uye zvirinani kuimisa, nekuti haina basa chero chinhu.
Kana mhinduro iri hongu "Zvakanaka, iwe unofanirwa kuzvibvunza mumwe mubvunzo: Ndinoda iTunes kuti izarurire otomatiki kana chishandiso changu cheIOS chabatanidza kune komputa yangu wotanga kuyananisa? Kana mhinduro iri 'kwete', ini handidi uye zviri nani kuidzima. Kana mhinduro iri "hongu", tinoisiya ichishanda.
iTunes Mubatsiri unongoshandiswa chete kune yedu iPhone, iPod kana iPad sync otomatiki (mimhanzi, mabhuku, nezvimwewo) pese patinoibatanidza kune komputa yedu uye, kana takaigadzira, kopi yekuchengetedza inoitwawo muTunes.
Maitiro ekudzima iTunes Mubatsiri
Kana tisingade iyo, zvakanak kuimisa. Maitiro acho ari nyore uye, nenzira, tichakwanisa kusunungura zviwanikwa zvinogara zvichidya izvi mubatsiri weTunes. Tichazviita zvinotevera.
Isu tinovhura iyo Sarudzo dzeSystem, kungave kubva kuDock, kubva kuLaunchpad, Zvikumbiro folda kana kubva kuapuro iri kumusoro kuruboshwe kona / Sarudzo dzeSystem.
Tinodzvanya paVashandisi nemapoka.
Tevere, tinodzvanya paZvinhu Zvekumba.
Kubva pane izvo zvandakakwanisa kuona, zvakakosha kuve nechokwadi chekuti haizowedzerwa kune iyo Starter Zvinhu zvakare, saka tichaita zvinhu zvakati wandei. Kutanga, tinotarisa bhokisi kuti tivanze.
Tevere, tinobaya-kurudyi uye sarudza Ratidza muKutsvaga. Zvichatiendesa kufolder uko iri wizard iyi.
Kana tangova mukati mefaira, tinoshandura zita. Ini ndaisa iTunes Helpr pairi, ndichingobvisa yekupedzisira E.
Tevere, tinobata chiratidzo chekubvisa (-), icho chinobvisa iyo iTunes Mubatsiri kubva kuZvinhu zveKumba.
Chekupedzisira, isu tinotangazve uye toona kuti kana isu tikabatanidza yedu iPhone ne iTunes yakavharwa, haichazovhurika. Tinogona zvakare kuvhura iyo Chiitiko Monitor, tsvaga "mubatsiri" kana "itunes" uye tarisa kuti haina kuoneka chero kupi. Inenge yanyangarika.
Kana iwe uchida kuchidzosera, iwe unofanirwa kuenda kuApplication folda, tinya kurudyi paTunes uye sarudza "Show Package Contents", pinda Mukati / MacOS, uchitumidze zita rekuti "iTunes Mubatsiri" uye, pakupedzisira, dhonza icon kuWindow Sarudzo hwindo kubva kwataive tabvisa padanho rechinomwe pamusoro.
Ko kana ndikashandisa Windows?
Zvakanaka, maitiro acho akafanana chaizvo, asi nzira yacho, zvine musoro nekuti iri rakasiyana rinoshanda system, rakasiyana. Tichazviita nekuita anotevera matanho:
Tinodzvanya kurudyi paWindows Start icon.
Isu tinosarudza Task Manager.
Kana ichivhura, tinosarudza Imba, inova iyo tabo iri pakati.
Iine pointer pamusoro iTunes Mubatsiri, tinya-kurudyi uye sarudza Disable.
Zvimwe zvacho zvakafanana nezve OS X: kurudyi-tinya futi uye tinya Vhura faira nzvimbo
Isu tinotumidza zita iro faira (zvirinani kuve nechokwadi pane kuti iite kuti itange zvakare pachayo) Kana isu tichida kudzosa zita, iyo nzira iyo iTunes Mubatsiri iripo iri muC: \_ Program Files \_ iTunes \_ iTuneHelper
Uye pakupedzisira, isu tinotangazve.
Ehezve, panguva ino ndinofanira kureurura chinhu chimwe: handina chokwadi chekuigonesa zvakare muWindows, sezvo ndanga ndiri mushandisi weMac kwemakore. Ini ndinofungidzira kuti kana iwe uchidzorera kune iro zita rekutanga uye wobva waritanga, iyo iTunes Mubatsiri inozozvidzoreredza yega pachayo kutanga. Kana ikasashanda uye ukapotsa uyu mubatsiri, unogona kugara uchiisazve iTunes.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Chii chinonzi iTunes Mubatsiri uye chakaremara sei?
mutongi mukuru akadaro
Kutenda tuto, rakabviswa kubva pakutanga.
Google Vanosiya Flash Ads
TSMC ichave yega mutengesi wechip yeiyo iPhone 7